Transportation System in Yangon Faces Challenges: World Bank | Myanmar Business Today
HomeAutomobileTransportation System in Yangon Faces Challenges: World Bank
Written by Tayzer Bhone Myint
New Transportation System, employed in Yangon to replace the old system in 2016, now faces technical and financial challenges that undermine its sustainability, according to the World Bank’s report called “Urban Transport in Yangon”.
Although YRTA’s institutional setup is improving, it is still precarious, and capacity and staffing are constrained. Coordination between different agencies also becomes cumbersome, especially when the institutional setting is highly fragmented.
There are about 1.9 million daily passengers using bus services in Yangon. Residents who do not own private cars have the largest mode share of buses across all income levels.
Bus transport contributes to nearly half of the trips in Yangon, and it is the dominant transportation mode across different socioeconomic groups. It shares for buses is still high, ranging from 18.2 percent to 24.1 percent across different income groups.
Having suchahigh modal share of bus transportation is an important advantage for Yangon in improving the urban transport system. In 2016, the Yangon Regional Government replaced Yangon Motor Vehicles Supervisory Committee (Ma Hta Tha) with the newly formed Yangon Region Transport Authority. YRTA launched new Yangon Bus Services (YBS) overwriting the existing bus services on January 16, replacing old bus routes with new ones and old buses with new ones.
ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများ (YBS)စနစ်သစ်သည်ရေရှည်တည်တံ့ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သောနည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ရန်ကုန်မြို့မြို့ ပြ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့(YRTA)၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံသည် တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသော်လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးဘဲ အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေကြောင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည်လည်းနှေးကွေးလေးလံဆဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခြေအနေများမှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲမရှိဘဲ အပိုင်းလိုက်ကွဲနေဆဲဖြစ်နေသည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရန်ကုန်တွင် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကြသူ နေ့စဉ်ခရီးသည် ၁ ဒသမ ၉ သန်းခန့်ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကားများ မပိုင်ဆိုင်ကြသည့် မြို့နေ ပြည်သူဝင်ငွေအဆင့်အားလုံးသည် ဘတ်စ်ကားဖြင့်သာ အများဆုံး သွားလာကြသည်။
ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးစဉ်အားလုံး၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်တွင်ဘတ်စ်ကား အသုံးပြုမှု မြင့်မားဆဲဖြစ်ပြီး မတူညီသောဝင်ငွေအုပ်စုများတွင် (၁၈ ဒသမ ၂) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၂၄ ဒသမ ၁) ရာခိုင်နှုန်းထိရှိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဘတ်စ်ကား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အသုံးပြုမှု မြင့်မားခြင်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့ပြ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် တိုးတက်စေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အားသာချက်ကို ဖြစ်စေသည်ဟုလည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှု ဗဟိုကော်မတီ(မထသ) ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့(YRTA) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများ (YBS) အစီအစဉ်ကို YRTA၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
YBS အစောပိုင်းကာလများတွင် ဘတ်စ်ကားစနစ်သစ်သည် ပင်မလမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်ရှိ အဓိကလမ်းကြောင်းတူများပေါ်၌ ဘတ်စ်ကားလိုင်းမျိုးစုံမှ ယာဉ်မောင်းများယှဉ်ပြိုင်မောင်းနှင်ရခြင်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ဘတ်စ်ကားလိုင်း အရေအတွက်ကို လျှော့ချခဲ့သည်။
YRTA သည် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေသောဘတ်စ်ကားအများစုကို အသစ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
Previous articlePresident Calls for Collective Action to Mitigate Covid-19 Impact
Next articleMyanmar Earns Nearly $600 Million from Rice Export